Brackenber Bothy, ikhabhathi yomthi epholileyo eDales.
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguJon
I-Bothy yikhabhathi enomtsalane yamaplanga enebhedi ezi-2 ezingatshatanga kwaye ibekwe kwigadi yabucala eneembono zeDales.
Isifudumezi seDyson kunye nesitshisi selogi ziya kukugcina ufudumele kwaye upholile. Ngaphakathi kuvakala ngathi yindawo yokutyibiliza etyibilikeni ke shiya onke amaxhala akho ngasemva kwaye ubalekele kuxolo nokuzola.
Ikhabhinethi ibandakanya i-infinity bath enombono, i-WC, i-oven microwave, ibhokisi epholileyo, isitovu senkampu, i-log burner, ukutshaja kwe-USB, indawo yokupaka ibhayisekile, ithumbu kunye nebhentshi yokujonga iinkwenkwezi / indawo ye-BBQ.
Akukho WiFi kodwa 3G, 1 pet avunyelwe, 1 imoto kuphela. max 2 iindwendwe.
I-Bothy ilungele abenzi beeholide abafuna into eyahlukileyo. Ikufuphi kakhulu noNxweme ukuya kuNxweme kwindlela yokuhamba, kunye nezinye iindlela ezininzi ezinomdla zokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile. Ilala ezi-2 kwiibhedi ezitofotofo zomntu omnye.
IMicrowave, isitovu sokukhempisha, ifriji encinci, isitshisi selog, loo, isinki, ibhafu enkulu, ukutshaja i-USB, izitulo zokukhempisha, iseti yeetawuli, ibhedi entle, izinto zokuthambisa, izitya, imbiza encinci nepani, iti & ikofu.
Zonke izinto zokulala zinikiwe kodwa sinikezela nge-10% I-CASHBACK ngosuku oye wajonga ngalo ukuba ubonelela ZONKE iibhedi zakho kunye neetawuli kodwa nceda usinike isaziso seeyure ezingama-48 kungenjalo sisenokuba sele silungisile amagumbi akho.
I-Bothy yikhabhathi eyenziwe ngamaplanga engama-24ft x 12ft kwaye ukubhukisha kwakho kubandakanya indawo yokuhombisa egqunyiweyo, indawo ye-BBQ, ibhentshi yokujonga iinkwenkwezi kunye negadi enkulu yabucala yeentyatyambo zasendle. Paka imoto yakho kanye ecaleni kwekhabhathi kwaye uzive ukhululekile ukuba uhambe ujikeleze igadi okanye unyuke umgama omde uye ngqo emaphandleni.
I-Bothy ifanelekile kubahambi, abahambi ngebhayisekile, abajonga iinkwenkwezi kunye nabo banqwenela ukuzipholela kwindawo ekwanti yabucala.
Le ndlu yenziwe ngamaplanga nophahla lwezinki zesintu. Udonga lwangaphambili ludityaniswe ngodonga lwamatye, ukubekeka kabini kunye ne-waney edge larch. Ngaphakathi emgangathweni kubuyiselwe ipayina yakudala kwaye iindonga zinemigca yompayini. Uphahla lunesibhakabhaka esikhulu sepanoramic kunye neembono zeDales.
Iibhedi ezimbini zomntu omnye zenziwe ngesandla ngomthi. Ininzi yokugcina ifumaneka phantsi kweebhedi, kwiishelufu ze-waney oak okanye kwindawo yophahla.
Ikhabhinethi ifakwe kakuhle kakhulu kodwa ukufudumeza okongeziweyo kubonelelwa ngumtshisi welogi. Isitovu segesi sokukhempisha siyafumaneka ukuze kuphekwe kumgangatho kunye ne-microwave ekuphekeni ngaphakathi. Kwigumbi lokuhlambela lonwabele ukucwina kwibhafu enzulu 'engenasiphelo' enombono wegadi yakho yasendle yabucala ngefestile enkulu eyehla kwinqanaba lokuhlambela.
Kwakhona kwigumbi lokuhlambela kukho i-loo entle, isinki yakudala kunye nokugcinwa okuqhubekayo. Iibhutsi ezinodaka ngaphandle kunye neebhayisekile zinokufakwa phantsi ngempompo enikiweyo.
Indawo yangaphandle yeyakho yonke kwaye yindawo ethandekayo yokuphumla.
Izixhobo eziphathwayo zinokufumana okanye zingafumani mqondiso. I-EE isebenza kakuhle.
4.98 · Izimvo eziyi-62
Xa ubhaliso lwakho luqinisekisiwe ndiza kukuthumelela iSikhokelo seHolide yeBrackenber Breaks enamacebiso amaninzi kunye nolwazi malunga neentsuku ezimnandi kwindawo yasekuhlaleni.
Imisebenzi ibandakanya; ukuhamba okukhulu, ukukhwela ibhayisekile, ukuhamba ngebhayisekile entabeni, uhambo lukaloliwe, ukutyelela iinqaba, tyelela iLakes kunye neDales, ii-pubs zendawo, iivenkile kunye neeresityu, ukubukela iintaka, ukujonga iinkwenkwezi, iivenkile ze-ice creams kunye nokunye okuninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Jon
Umamkeli wakho, uJon, wonwabe kakhulu ukukunceda ngemiba emininzi yeholide yakho ukusuka ekuqeshweni kwebhayisekile ukuya ekulungiseleleni iteksi yasekhaya. Ukuba iindwendwe zifuna ukudibana kunye nokubulisa ngoko kulungile. Kungenjalo singayishiya lendawo ivuliweyo kuwe uzicingele ngokwakho.
Umamkeli wakho, uJon, wonwabe kakhulu ukukunceda ngemiba emininzi yeholide yakho ukusuka ekuqeshweni kwebhayisekile ukuya ekulungiseleleni iteksi yasekhaya. Ukuba iindwendwe zifuna…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kirkby Stephen